iOS5ကိုအဆင့်မြင့်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ — MYSTERY ZILLION
iOS5ကိုအဆင့်မြင့်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
iphone version 4.3.2 ကနေ version5ကို ဘယ်လို ​ပြောင်းမလဲ။ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ ပြောင်းပြီးရင် ဘာတွေ ပိုထူးခြားသွားမလဲ။
iOS5အတွက်ရော jailbreak လုပ်လို့ရပြီလား။ မြန်မာ keyboard ရော အဆင်ပြေသလား။ သိတဲ့သူ ဖြေပါ။
ဘယ်သူမှလဲ ဖြေဘူး #:-s
jailbreak still not stable yet.
keyboard can't use now.
upgrade my iphone to ios5 finish . Enjoying my ios5 now. On lock screen can call the miss call back with swipe. No need password. Thank kosaturngod. Not jailbreak yet. All myanmar font can not see. Only see many square.